Myanmar Monk Student Association: June 2011
၁၃၇၃ ခုနှစ် MMSA အဖွဲ့၏ ဗဟိုကော်မတီဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်း
အတွင်းရေးမှူး= ဦးဝဏ္ဏိဿရ ဘဏ္ဍာရေးမှူး= ဦးခေမာသိရီ
ဒု-အတွင်းရေမှူး= ဦးသုစိတ္တ ဒု-ဘဏ္ဍာရေးမှူး= ဦးဒဿနိယ
စာရင်းစစ်= ဦးဉာဏိက ဒု-စာရင်းစစ်= ဦးကိန္ဒ
ပြန်ကြားရေ= ဦးဝရဗုဒ္ဓိ ဒု-ပြန်ကြားရေမှူး= ဦးပညာသီဟ
MMAS ၏ နည်းပညာ နှင့် မီဒီယာများကို ဦးအာလောက နှင့် ဦးဒဿနိယ
တို့မှ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Monday, 27 June 2011
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ MMSAမှတ်တမ်းများ |
ပထမအကြိမ်၊ ချင်းမိုင်မြို့၊ မဟာချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်၌ တက်ရောက်ပညာ သင်ကြားနေကြသော မြန်မာ ကျောင်းသား ရဟန်းတော် (၂၄)ပါးတို့အား ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ နေ့လည်ဆွမ်းလှူဒါန်းခြင်းနှင့် တရားတော်နာယူခြင်း၊ မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍၊ကုသိုလ်ပွားတရားတော်နာကြားရန် နှင့် ကျွေးမွေး ဧည့်ခံသည့်၊ အာဟာရများကို လက်ခံသုံးဆောင်နိူင်ရန် အောက်ပါ အစီအစဉ်တိုင်း ကြွရောက်လာပါရန် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် ။ ။ ၁၃၇၃-ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့် နေ့။ (၁၅ -၇-၂၀၁၁ )-သောကြာနေ့။
အချိန် ။ ။ နံနက် (၉:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် အနုမောဒနာ တရား နာကြားခြင်း ၊ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း၊ရေစက်သွန်းချ အမျှအတန်း ပေးဝေပါမည်။
 နံနက် (၁၁:၀၀) နာရီတွင် သံဃာတော်များအား နေ့လည်ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပြီး၊ ဧည့်ပရိသတ်များအား နေ့လယ်စာဖြင့်ဧည့်ခံပါမည်။
နေရာ ။ ။ မဟာချူလာလောင်ကွန် တက္ကသိုလ် (ဝပ်ဆွန်ဒေါ့) စူသပ်လမ်း ၊( Mahachulalong University,Wat Sundok temple,Suthep Road).
 အလှူပါဝင်လိုပါက ဆက်သွယ်ရန်
 ဦးခင်ဦး(အာလူး) 0800334487 (1.2 call)
စိုင်းကျော်မိုး+မဆွေ (0856254714 ) (1.2call)
 ကိုမောင်တူး+မဂျူလီ (0897551837)
 မစန်းဝေ ( 0856220115 ) (1 .2 call )
 မစိုး (မဘေဘီ) 0896367165
ကိုမောင်တူး မိသားစုမှ ၊ ရခိုင်မုန့်တီ
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Sunday, 26 June 2011
ဗုဒ္ဓလမ်းညွှန်ခဲ့သော ဝေဖန်ပိုင်းခြား၊ စဉ်းစား ဆင်ခြင် စကားဆိုခြင်း
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on Saturday, 25 June 2011
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ မှတ်သားစရာ |
စစ်တွေ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား ၂၄ ဦးကျောင်းထုတ်ခံရ
စစ်တွေ တက္ကသိုလ်မှ တတိယနှစ် ကျောင်းသား ၂၄ ဦး ကျောင်းထုတ်ခံရကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကျောင်းထုတ်ခံရခြင်းကို စစ်တွေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
"Semester one နှစ်ဝက် စာမေးပွဲ စစ်တဲ့ နေရာမှာ စာကူးချတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရူပဗေဒ ၉ ဦး၊ သတ္တဗေဒ က ၁၀ ဦးနဲ့ တခြား ဘာသာရပ်တွေက ၅ ဦး ဖြစ်ပါတယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
ကျောင်းထုတ်ခံရသော ကျောင်းသားများမှာ တတိယနှစ် ကျောင်းသားများ ဖြစ်ကြပြီး ယခုအပတ်အတွင်းက ကျောင်းထုတ်ခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေမြို့နယ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ် ဦးအောင်မြကျော်မှလည်း ကျောင်းထုတ်ခံရခြင်းကို အတည်ပြု ပြောကြားပြီး သူက " သာမန် ကျောင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကြောင့် ကျောင်းထုတ်ခံရတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တခြား ကိစ္စရပ်တွေကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကိုတော့ ကျနော်တို့ စုံစမ်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ကျောင်းသားများ ကျောင်းထုတ်ခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on Sunday, 19 June 2011
ချင်းမိုင်(MMSA)အဖွဲ့၌ နှစ်ပါတ်လည် ဗဟိုကော်မတီ အသစ်တရပ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ရန် သတင်းရရှိ
( ၉ .၆ ၂၀၁၁ ) နေ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ( ၁၆ .၆.၂၀၁၁) နေ့ အစည်းဝေးကို ထပ်မံပြုလုပ်သွားမည်ဟု (MMSA)အဖွဲ့ဝင်များ သဘောတူညီချက်အတိုင်း
သံယာတော်အ၇ှင်မြတ်များအား သံယာကျွန်အဖြစ်ဖြင့် တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိမည့် မဟာကုသိုလ်ထူးကို ပိုင်ဆိုင်နိူင်ဖို့
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ကြပါရန် ပြန်ကြားရေးမှ လျှောက်ထားအပ်ပါသည် သံဃာတော် အရှင်မြတ်တို့ဘုရား။
၁) လက်ရှိတည်ဆဲ ဥပဒေကို အတည်ပြုသွားရန်၊
၂) ဗဟိုကော်မတီ အသစ်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းသွားရန်၊
၃) MMSA အသင်းသားအသစ်များ လက်ခံသွားရန်၊
၄) ဝါဆို သက်န်းဆက်ကပ်လှူမူဆိုင်ရာများ နှင့်
၅) အထွေထွေ ကိစ္စများဆွေးနွေးသွားရန် ။
.နေ့ဆွမ်းကို လက်ရှိချင်းမိုင်း ကျောင်းသား ရဟန်းတော်များမှ လျှုဒါန်းမည်ဖြစ်သောကြောင်း (MMSA )
အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ လျောက်ထားအပ်ပါသည် သံယာတော် အရှင်မြတ်တို့ဘုရား...။
Section(4) Room No(1)
အချိန်...နံနက် (၉) နာ၇ီခွဲတိတိ
နေ့ရက်...၁၉ ..၆ ..၂၀၁၁ (တနဂ်နွေနေ့)
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ပြန်ကြားရေးမှူး on Friday, 17 June 2011
Comment on Ma Tin Tin Myint’s idea
It isagood idea to save money day by day, as possible as we can, for the children who were affected by the cyclone nargis in Myanmar. I agree with you that we have to do for long-term.
On the other hand, what we should keep in our mind is that we are not spending our money and time for less important things. As you know, in every international events, Myanmar students are lagged behind others. That does not mean we do not have abilities. We showed that now we, Myanmar students, have abilities by participating at Asean festival.
Yes, our MSA Tokyo was born to help the victims of cyclone. I agree. But this is founded informally. there is only one objective. There is no president, no vice president, no secretary, no treasurer, no representatives from the respective schools. Thus we should not stop in one stage. We should expand our group. To expand our group, we should grasp every opportunities. I mean we should participate big and well-known international events. By doing so, our MSA group activities will be recognized by other Myanmar students in Japan. Hopefully, they will become interesting at our group.
And then we should establish Myanmar Students’ Association formally. Up to now, member status is just about 30 students. There are many students who still does not know about our group, and many students who knows about the group but still do not join to MSA. So we should invite them to join our group.
First thing we need to do is “Gathering Myanamr Students”. Second thing we need to do is to establish the group formally. Third, we should elect executives and representatives from each school. After establishing the MSA formally, we may operate our group activities effectively by division of works and times.
This is my opinion. May be someone has better idea than mine.
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ U pannajotamcu on Saturday, 11 June 2011
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ သုတရေးရာ |
With the protection environment unlikely to change significantly in the short to medium term, UNHCR will continue to advocate for the Government to make policy changes relating to refugees. An additional priority will be to strengthen public awareness of asylum issues in order to expand the humanitarian space for refugees, asylum-seekers and stateless people in Malaysia.
UNHCR will enhance its interventions to ensure that asylum-seekers and refugees are not subject to arrest, detention, deportation or . In the absence of the Government's involvement in refugee processes, UNHCR will undertake to register asylum-seekers, determine their status claims and provide them with documentation.
Similarly, UNHCR will make efforts to address the basic needs of refugees in terms of livelihoods, health care, education and community development, ideally through community participation, self-management and self-reliance. This will remainachallenge, as refugees in Malaysia are of diverse nationalities and ethnic backgrounds, and are widely dispersed in urban areas as well as remote locations.
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ U pannajotamcu on
2011 UNHCR country operations profile - Malaysia Working environment
Malaysia hosts some 90,000 refugees and asylum-seekers, of whom 92 per cent are from Myanmar. Other significant refugee populations in the country originate from Afghanistan, Iraq, Somalia and Sri Lanka. The number of refugees and asylum-seekers has doubled since the end of 2008 asaresult of large-scale registration of asylum-seekers, many of whom had been in the country for years.
Malaysia is not party to the 1951 Refugee Convention or its Protocol. There is currently no legislative or administrative framework for dealing with refugees. This challenging protection environment makes it difficult for UNHCR to fulfil its mandate in the country, which has some3million migrants, 1.5 million of whom are considered undocumented migrants.
By law, refugees are not differentiated from undocumented migrants. They are therefore vulnerable to arrest for immigration offences and may be subject to detention, prosecution, whipping and deportation. In the absence ofanational administrative framework, UNHCR conducts all activities related to the reception, registration, documentation and status determination of asylum-seekers and refugees. Since refugees and asylum-seekers have no access to sustainable livelihoods or formal education, UNHCR runsalimited number of humanitarian support programmes for them, in cooperation with NGO partners.
Malaysia also hostsapopulation of some 60,000 Filipino Muslims in the province of Sabah for whom the Malaysian Government has assumed responsibility, and an estimated 40,000 potentially stateless people in Peninsular Malaysia.
Sharingapleasure
Long time no see! I hope you are doing well in your studies.
I would like to share my pleasure on reinstatement ofaprimary school which collapsed and was washed away by the Nargis. That school was located inaremote village in Pegu Division. There, the Sayardaw of the village has been paying his great effort to establish this school for the children, most of whom are orphans, to get access to regular education. Unfortunately, the cyclone Nargis didn’t spare their school on that night. "Oh my God! We have no school. Where should we go and study?" How poor the children are! Then, Dr. Ni Ni Win, one of the Myanmar students who used to study in Tokyo Medical and Dental University, working as an Assistant Professor in Malay University knew the condition through her parents and began to help as much as she could. She shared the story with me, and her japanese teachers and friends in Japan. Many japanese professors, dental surgeons and students as well as some japanese friends who are helping Myanmar students in many ways donated as much as they could. All together about 30 laks in Myanmar Kyats were collected and sent back. After one month, the school has been rebuilt and the children are now studying happily. I would like to thank all persons for their contribution without which the children would have no chance to continue their study. Sayardaw also sent an acknowledgement letter mentioning that the donation not only meant to those children nor the village they live but also for our country asawhole.
2011 UNHCR country operations profile - Myanmar Working environment
The situation in Myanmar will undoubtedly be influenced by the outcome of the first elections in 20 years, which are scheduled for November 2010. The first quarter of 2011 is expected to beaperiod when the humanitarian and development community establishadialogue with the evolving administrative structures of the new Government. UNHCR is hopeful that it will be able to build on its existing agreements for operations in Myanmar's northern Rakhine State and in the south-east of the country during this period.
In northern Rakhine State, interventions by the authorities, with UNHCR's support, following the severe flooding in mid-June 2010 andasubsequent focus on infrastructure development, were positive moves by the Government in this region, which hosts 750,000 Muslim residents without citizenship. The increase in the number of temporary registration cards being issued to this population and their participation in the elections could be seen as first steps by the Government towards addressing their status.
In the south-east, the conflict along the Thai-Myanmar border has continued since independence in 1948. While some groups have signed ceasefire agreements with the Government and are currently being transformed into the official Myanmar Border Guard Force, the armed conflict and its negative impact on the local population continue. The conflict has claimed many lives and displaced up to 500,000 people, either across the border into Thailand or to safer areas within Myanmar.
With the agreement of the Government of Myanmar, UNHCR established an operation in the south-east in 2004 and has gradually gained access to areas of displacement. Despite the large area of operations, the remoteness of the locations to be covered and security constraints, protection and essential humanitarian assistance have been delivered to communities in 21 townships. UNHCR has received indications from the Government that an expansion of the programme would be needed in 2011.
Recent comprehensive needs assessments by UNHCR show that the approximately 750,000 Muslim residents without citizenship in the three townships of Maungdaw, Buthidaung and Rathedaung of northern Rakhine State still require humanitarian assistance to ensure access to basic public services, such as education, health, water and sanitation.
UNHCR continues to intervene at all levels of the Government in order to address restrictions on freedom of movement,alack of marriage and birth rights, and land confiscation. It also addresses protection issues that arise asaresult of cultural practices by working with community and religious leaders, women, children and other vulnerable groups. UNHCR is increasing its focus on programmes that promote peaceful coexistence between the Muslim and Rakhine communities.
In south-eastern Myanmar, UNHCR provides humanitarian assistance to mitigate the effects of displacement on communities. These communities lack essential public services such as health centres and clean water, as well as shelter, protection and livelihood support. The projects focus on the construction and rehabilitation of basic infrastructure. Other projects, such as shelter interventions, target vulnerable individuals and families, including female-headed households. Additional needs include mine risk education, as well as livelihood opportunities.
ပုထုဇဉ်တို့ ကြိုတင်မသိနိုင်သော အရာငါးမျိုး
ဇီဝိတံ ဗျာဓိ ကာလောစ၊ ဒေဟနိက္ခေပနံဂတိ-
ဟူသော ဒေသနာအတိုင်း ပုထုဇဉ်တို့ ကြိုတင်မသိနိုင်သော အရာငါးမျိုးတွင် သေခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောအရာက ငါးမျိုးလုံး ဖြစ်နေသောကြောင့်ဟု ဖြေပါမည်။ ၎င်းငါးမျိုးမှာ-
၁။ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ သေမည်ဟု မသိနိုင်၊
၂။ ဘယ်အနာရောဂါနှင့် သေမည်ဟု မသိနိုင်၊
၃။ နံနက်၊ နေ့လည်၊ ည ဘယ်ကာလ မှာသေမည်ဟု မသိနိုင်၊
၄။ ဘယ်င်္သချိုင်းမှာ ချမည်ဟု မသိနိုင်၊
၅။ ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ လူ၊ နတ်၊ ဘယ်ဘုံရောက်မည်ဟု မသိနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း မြတ်စွာဘုရားရှင်က ကွေးသောလက် မဆန့်ခင်၊ ဆန့်သောလက် မကွေးခင်၊ သေခြင်းတရားသည် ရုတ်တရက် ဆိုက်ရောက်လာနိုင်သည်ဟူ၎င်း၊ မရဏံ မေ ဓုဝံ၊ ဇီဝိတံ မေ အဓုဝံ၊ “ငါ့အား သေခြင်းတရားသည် အမြဲရှိ၏။ ငါ့အား အသက်ရှင်ခြင်းသည် အမြဲမရှိ” ဟူ၍၎င်း ဟောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) အသေမြတ်ချင် သေနည်းသင် စာအုပ်မှ-
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Wednesday, 8 June 2011
သမ္မတမိန့်ခွန်း အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တိုင်းရင်းသား ၅ ပါတီ တောင်းဆို
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီ ၅ ပါတီရဲ့ ၂ ရက်ကြာ အစည်းအဝေးဟာ ဒီကနေ့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေ ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် အချက် ၅ ချက် တင်ပြ တောင်းဆိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြံပြု တောင်းဆိုချက်တွေဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပကတိ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီနေတာကြောင့် အစိုးရဘက်က အကောင်အထည် ဖော်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဒီအကြောင်း အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြထားပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ချင်းအမျိုးသားပါတီ၊ မွန် ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီနဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီတို့ ပါဝင်တဲ့ ၅ ပါတီ အစည်းအဝေးဟာ ဒီလ ၂၆ ရက်နေ့က စတင်ခဲ့ပြီး ဒီကနေ့ ၂၇ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ပြီးဆုံးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစည်းအဝေးအတွင်းမှာ လွှတ်တော်ကျင်းပစဉ်က ဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့ကြတဲ့ အချက်တွေကို ပြန်လှန် သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီး ၂၇ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာတော့ အစိုးရသစ်နဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို အချက် ၅ ချက် တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနိုင်ငွေသိမ်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
“အဲဒီ ၅ ချက်က သမ္မတရဲ့ မိန့်ခွန်းကို ကြိုဆိုတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖြစ်အောင်လို့ လုပ်ပေးပါ ဆိုပြီးတော့ တောင်းဆိုထားတဲ့ သဘောရှိတယ်။ နံပါတ် ၂ က တိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်တဲ့ နေရာမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကတော့ တိုင်းဒေသကြီးမှာ နေတဲ့သူထက်ကို ခြားနားတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရမယ်ဆိုရင်တော့ တိုးတက်လာမယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရအောင် တက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်က ဖန်တီးပေးပါဆိုတဲ့ တချက်။
“နောက်တချက်က အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေ့ါဗျာ။ ဒီအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ပေးပါ ဆိုပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး တောင်းဆိုထားတဲ့ သဘောပါ။ နောက်တခါ နယ်စပ်ဒေသမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့က နယ်စပ်ဒေသမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို တာဝန်ပေးမယ်ဆို ဆောင်ရွက်ရတာ ပိုပြီးတော့ လွယ်ကူမယ်ဆိုတဲ့ အနေအထား။ နောက် တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ နိမ့်ကျနေတဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြားကဏ္ဍတွေ အတွက်ကတော့ လူသားချင်း စာနာတဲ့ အကူအညီကို ပိုမိုပေးဖို့ ဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ မိသားစုကို မေတ္တာရပ်ခံပြီး တောင်းဆိုထားတယ်ပေါ့ဗျာ။”
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီက အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးလှစောကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ အရာတွေကို အကျေအလည် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး တောင်းဆိုထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ တောင်းဆိုတာတွေက ဗမာပြည်မှာ တကယ်ဖြစ်သင့်တဲ့ ဟာတွေပဲဗျ။ ဥပမာ General Amnesty ကို ကျနော်တို့ တောင်းဆိုတယ်။ ဒါကလည်း ဗမာပြည်မှာ တကယ် အမျိုးသား ချစ်ကြည်ရေးကို ရှေ့ရှုပြီးတော့ General Amnesty ကို အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ပဲ။ ထုတ်လည်း ထုတ်ပေးမယ်လို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
“နောက်တခုကလည်း ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်ဘဲနဲ့ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ဖို့အတွက် တပ်မတော်ဘက်ကရော၊ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေ ဘက်ကရော လောလောဆယ်မှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲမယ် ဆိုရင်တော့ ပြည်သူတရပ်လုံးကတော့ တော်တော် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြမှာပဲ။ အဲဒါလည်း ဘာမှ မလိုက်လျောနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ပြည်သူတရပ်လုံးကလည်း မျှော်လင့်တဲ့ကိစ္စ၊ တကယ့်ကို ဖြစ်နိုင်တဲ့၊ လက်တွေ့ကျတဲ့၊ ပြည်သူတရပ်လုံးလည်း မျှော်လင့်တဲ့၊ နိုင်ငံတကာမှာလည်း အင်မတန် မင်္ဂလာရမယ့် ကိစ္စပေါ့ဗျာ၊ ကျနော်တို့က တင်ပြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။”
ဒီတောင်းဆိုချက်တွေ အပေါ်မှာတော့ အစိုးရက အကောင်အထည် ဖော်ပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ် ၅ ပါတီဟာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး အလားတူ အကြံပြုတာနဲ့ ဝေဖန်တာတွေကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးလှစောက ဆက်ပြောပါတယ်။
ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်နဲ့ ရှမ်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီ ၅ ပါတီဟာ အရင်ကလည်း ဒု-သမ္မတ တနေရာကို တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဦးကို ခန့်ထားဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ရာမှာ သူတို့ တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း အောင်မြင်မှု ရခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on
Singapore နိုင်ငံ Shelton College မှ Scholarship များပေးအပ်နေ
စင်္ကာပူနိုင်ငံ Shelton College မှ မြန်မာတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသား/သူများအတွက် 30 to 100 % Scholarship Exam Test ကို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုလိုသူများအနေဖြင့် OSM Education Centre (Myanmar) တွင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ ဖြေဆိုရန်စာရင်းပေးသွင်းရမည့်ရက်မှာ မေလ ၁ ရက် နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိဖြစ်ပြီး Scholarship ၀င်ရောက်ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူများမှာ အနည်းဆုံး အသက် (၁၅) နှစ်ပြည့်ထားရန် လိုအပ်သည်။ အဆိုပါစာမေးပွဲကို နှစ်ကြိမ်ခွဲ၍ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် 1 st Exam အဖြစ် English Reading & Writing ကို ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင်2nd Exam အဖြစ် Oral Test ကိုဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း OSM Education Centre (Myanmar) မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ စာမေးပွဲမှ Results များအား ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။